Mahdi Guuleed “Guddigii doorashada 2016, waxaa ku jiray La Taliyihii gaarka ahaa ee Xasan Sheekh” – AfmoNews
Mahdi Guuleed “Guddigii doorashada 2016, waxaa ku jiray La Taliyihii gaarka ahaa ee Xasan Sheekh”
Ra’iisul Wasaare kuxigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Giileed ayaa difaacay Guddiyada doorashada heer Federaal ee dowladdu magacawday, kaasoo qeyla dhaan ay ka timid in xubno ka tirsan shaqaalaha rayidka dowladda iyo Nabadsugida ka qeyb ka yihiin Guddiyada.
Mahdi Guuleed oo la hadlayay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in aysan jirin cid ka tirsan Ciidamada amniga oo ka tirsan Guddiyada doorasho heer Federaal iyo Guddiga xalinta khilaafaadka.
Waxaa uu sheegay in Guddigoo doorashada e sanadkii 2016 ay ku jireen La Taliyeyaal ka tirsanaa Xafiiska Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha.
Mr Guuleed ayaa xusay in Guddiyada ay magacaabeen kaliya ku jiraan labo xubnood oo ka tirsan Madaxtooyada iyo Ra’iisul Wasaaraha.
“2016 Guddigii Doorashooyinka maamulaysey waxaa ka mid ahaa Cumar Dhagey oo ahaa la-taliyihii gaarka ahaa ee Sharciga Madaxweyne Xasan Sheekh, kadibna noqday guddoomiyaha Guddiga.. Maxamed Keynaan oo la-taliye sare ka ahaa xafiiska Madaxweynaha, Nafiso Geedi, ka shaqeyneysay xafiiska Madaxweynaha…, C/raxmaan Sheekh Mucaawiye oo ahaa ku xigeenkii xoghayaha xafiiska Ra’iisal wasaaraha.. Waxaa ka mid ahaa Mustaqiim oo ahaa la-taliyaha siyaasada wasaaradda arrimaha gudaha. Guddiga iminka waxaan ka garanayaa C/nuur iyo iyo Inan ka tirsan la-taliyeyaasha xafiiska Ra’iisal wasaaraha..” ayuu yiri Mahdi Guuleed oo is-barbardhig ku sameeyay Guddiyada Doorashada ee Doorashadii 2016 iyo 2020-ka.
Mahdi Guuleed ayaa ku dooday in dowladda siyaasadeeda ka mid tahay in dhalinyarada fursad la siiyo, sidaasna loo magacaabay xubno u badan dhalinyarada.
Musharaxiinta Madaxweynayaasha oo ay ku jiraan Madaxweynayaashii hore iyo Ra’iisul Wasaarihii ayaa waxay cabasho ka keeneen Guddiyada doorashada la magacaabay inay ku jiraan xubno ka tirsan Nabadsugida, iyagoo ka digay xubnaha guddigaas dhex dhexaadnimadooda iyo inay qalalaase amni keento.